Nhau - Dzidza Zvakawanda Nezve Nyaya yaMeari
Hangzhou Meari Technology Co, Ltd. ndiye anotungamira mukugadzira zvigadzirwa zvemumba zvakangwara. Meari inotarisa kumatekinoroji epamberi senge tekinoroji yevhidhiyo, AI, IoT, mapuratifomu emakore. Sekambani inosanganisa R&D, kushambadzira, uye cheni yekupa, Meari inopa imwechete-yekumira smart mavhidhiyo mhinduro.
Meari Technology yakazvipira kusimudzira nekugadzira zvigadzirwa zvemavhidhiyo epamba uye kuyedza kupa vatengi vepasirese zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvemumba, imwechete-yekumusha chengetedzo mhinduro, uye akanakisa masevhisi masevhisi.
Isu tinotarisa pane kugadzirwa kwechigadzirwa uye hunyanzvi hwekuvandudza tekinoroji uye tinotangisa yakazara yakazara yemavhidhiyo epamusha zvigadzirwa, zvinosanganisira zvemukati makamera, ekunze makamera, pan-kurerekera makamera, bhatiri makamera, akangwara madhoo, mafashama emagetsi makamera, mucheche cheki, uye IoT vhidhiyo module.
Kare kumashure isu tanga tichiri timu diki yevanhu gumi nevaviri, uye isu tanga tichigadzira chigadzirwa chedu chekutanga muhofisi yedu yeHangzhou.
Parizvino, isu tine mazana evashandi, uye makambani akasimbiswa muEurope. Zvigadzirwa zvedu nemasevhisi zvinofukidza nyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu, uye zvakapinda muzvitoro zvikuru zvinozivikanwa muEurope neAmerica, zvakaita seWalmart, Best Buy, Home Depot, Kingfisher, uye MediaMarkt. Iko kutumira kwegore negore kunosvika makumi emamirioni, kushumira makumi emamirioni evatengi pasirese.
Dare rekutanga reMeari Technology rinoumbwa nevakuru veR & D nyanzvi, nyanzvi dzebhizinesi, uye nyanzvi dzezvinhu zvekutengesa zvine ruzivo rwakakosha muminda yeimba yakangwara, IoT uye vhidhiyo tekinoroji kweanoda kusvika makumi maviri emakore. Nhengo dzepakati dzinobva kukambani inotungamira yepasirese, IoT uye AI makambani.
Mushure memakore ekuvandudza, Meari yakavaka ine simba R & D timu. Parizvino, vanopfuura makumi mana muzana evashandi vekambani vanobva kudhipatimendi reR & D, kusanganisira graphic interface dhizaini, dhizaini dhizaini, dhizaini dhizaini, dhizaini dhizaini, yakadzamirwa software, App, gore chikuva uye server, nezvimwe.
Meari yakavambwa muHangzhou.
Iva unozivikanwa kune ISO 9001 uye ISO 14000.
Zvigadzirwa zvakapinda mumisika yeEuropean neNorth America.
Iva anozivikanwa kuBSCI.
Zvigadzirwa zvakapinda mumapuratifomu ekutengesa akadai seWalmart uye Kinfisher.
Takatanga kupinda mumisika yeAustralia, Japan neKorea.
Iva anozivikanwa kuRBA.
Vakapasa National yepamusorosoro advertising.
Inodanwa kuForbes Top 100 AIoT Makambani.
Akavhura misika muSouth America, Southeast Asia neIndia.
Yakaburitsa yakazara yakazara smart yemavhidhiyo epamusha zvigadzirwa, ayo mabhatiri emagetsi zvigadzirwa anotengeswa mushe paAmazon.
Yakagadzwa bazi muEurope.
Kutumirwa kwegore negore kwakapinda pamberi peiyo indasitiri.
Kuenderera mberi kuburitsa yechipiri-chizvarwa bhatiri emagetsi zvigadzirwa uye Vacheche Monitors.
Kunda iyo Evergreen Mubairo kubva kuMari Yezvemagazini.
Optics akateedzana zvigadzirwa akahwina iyo Red Dot Mubairo uye iyo IF Dhizaini Mubairo.
Meari inonamatira kune musimboti webasa we "mutengi anodikanwa-anotarisisa, R&D seyakadzika", uye anovavarira kupa mutengi wese neakakwira-mhando, nyore, one-mira vhidhiyo chengetedzo mhinduro masevhisi.
Sekambani inoteedzera tekinoroji, Meari ane akateedzana matekinoroji epakati mumunda wekutarisa vhidhiyo, kusanganisira:
Novel Chitarisiko Dhizaini
Yakanaka Zvimiro Maitiro
ISP Mufananidzo Kugadzirisa Algorithm
Akangwara Network Kufananidza
Meari ine yakazara vhidhiyo chigadzirwa mutsetse, kusanganisira yemukati yakamisikidzwa makamera (Mini akateedzana), zvemukati PTZ makamera (Speed ​​akateedzana), ekunze akanamira makamera (Bullet akateedzana), yekunze PTZ makamera, Vacheche monitors, bhatiri makamera (Snap Series), smart doorbell kamera (Bell akateedzana), mafashama emagetsi makamera (Ndege akateedzana), uye mavhidhiyo module anosangana nezvimwe zvigadzirwa zvemumba zvakangwara zvakaita semagaraji, vanodyisa zvipfuyo, smart kukiya masuo, nezvimwe.
Panguva imwecheteyo, Meari inotsigira yakazara yakazara yeIoT chigadzirwa kuwana mhinduro, ichibvumira vatengi kushandisa yakabatana APP kubata akasiyana siyana smart dzimba zvigadzirwa.
Ipa zvigadzirwa zvemumba zvakangwara zvinoshamisika vatengi.
Iva tekinoroji kambani ine musika wepasi rose kukwikwidza.